महाकविको सम्झना / शङ्कर लामिछाने | Online Sahitya
जीवनमा पहिलोचोटि देवकोटाजीसित परिचय पाउने उत्साहमा मेरो मन धकमक गरिरहेको थियो । 'सुन्दरीजल' र 'शाकुन्तल महाकाव्य' लेख्ने कविको साक्षात् दर्शन । भर्‍याङको हरेक खुड्किला पहाडझैं लागेपछि २/२ वटा गरेर म कोठामा उप|mेर एक्कासि पुगेँ । देखेँ- कालो कम्बलले गुटुमुटु भएर एउटा मैलो फोहोर ओछ्यानमा पल्टेर घोप्टिई देब्रे हातले चिउँडो अडाएर उच्चस्वरमा एकाग्र चित्त भई पढिरहेछ । एक मन त लगत्तै र्फकूंजस्तो लाग्यो सायद उहाँ त्यो महाकवि होइन होला भन्ठानेर । के छ अनुहारमा कालो फुस्रो मुख छ । कपालका रौं आफूखुसी दस दिशा दौडिरहेछन् । कम्बलबाट निस्केका हातमा झ्याप्प झ्याप्पी रौं कालो फुस्रो हात मसी-मसी लागेको । यस्तो मानिस पनि महाकवि । कोठामा चारैतिर हेरेँ । आँधीझैँ हुरी भर्खरै त्यहाँ नाचेर गएझैँ हरेक दिशामा कागज छन् । सायदै कुनै किताब सद्दे होला, मसी नघोप्टिएको । सुकुलको कुना नराम्रो देखिन्थ्यो- एक कुनामा मात्र उज्यालो भएर होला । कुनै समयमा पोतेको चुन झरिसकेको थियो र आज त्यही भित्तामा एकातिर श्रीकृष्ण, रवीन्द्रनाथ टैगोर, अर्काेतिर अर्काे कुनै दारीवाल बूढो, यिनीहरूका चित्र पेन्सिलले लेखिएका छन् । यत्तिले नपुगेर फुटेको मकल, चारैतिर झरेको खरानी । मेरो उपस्थितिको ज्ञान भए छ क्या त्यो संगीत अकस्मात् बन्द गरेर उहाँ मतिर हेरिरहनुभएको ।
'हुन्छ ... हुन्छ ...' स्वीकार गरेर उहाँले डसना
पल्टाउनुभयो । फुलमार चुरोटका ठुटा कमसेकम २७ जति होलान् डसनाका कापमा । एउटा झिकेर मतिर हेर्नुभयो । खल्तीबाट सिंगो चुरोट एवं सलाइ झिकेर मैले उहाँलाई दिएँ । असल चुरोटलाई ओल्टाइपल्टाई हेरिदिँदा मलाई त्यसबखत आफैंमाथि लाज लाग्यो, किन किन ? चुरोट सल्काएर उहाँले आफ्ना अनुसन्धान जारी राख्नुभयो । अन्तमा निराश भएर मतिर हेरी भन्नुभयो-
कोही नपाएर होला उहाँ त्यसै र्फकनुभयो अनि ईश्वरीय औजारले कलम ताछ्न लाग्नुभयो दाँत एवं नंग्राले । बीचबीचमा कुरा हुँदै थियो । उहाँ आफैं बोलिरहनुभएको थियो । मेरो त घाँटीभित्र आगो जलिरहेको थियो ।
त्यो चिठी त आज मसँग छैन तर त्यो बहुमूल्य चिठीको केही वाक्य म अहिले पनि झलझल सम्झन्छु । 'महाशय, मलाई अहिल्यै माघ-पुस लागेको छ । माघ झरीझैं मेरो जीवन नै कठाङ्गि्ररहेछ । मनमगजमा तुषारो जमेझैं दुःख जमेका छन् । आज मैले लेखेका साहित्य के साहित्य होलान् र ?'
ऐतिहासिक यो पत्र जसको मूल्य सन् १९५२ मा १०,००० भन्दा कम होइन, लिएर मनमनै कठाङ्गि्रँदै म पनि बाहिर निस्केँ ।
'खै, गुरुजी, मैले पत्ता लगाउन सकिनँ, मलाई कस्तो
लाग्यो ।' लाग्छ हामीलाई त्यसबेला, जब हामी राम्ररी तहमा पुग्छौं । मलाई कविता त अनौठो लाग्यो तर त्योभन्दा अर्कै कुरा अनौठो लाग्यो, भनूँ ?'
र्फकने बेलामा कागजको एक मुठो अगाडि राखेर गुरुजीले भन्नुभयो- 'मकहाँ हराउनेछन् । जो पनि आउँछ, लैजान्छ, हराइदिन्छ । यी अलिकति गद्य र कवितासंग्रह छन्, आफूकहाँ सुरक्षित राखिदिनोस् । तपाईंकाँ भो भने हराउनेछैनन् ।'